आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, को को मन्त्री बन्दैछन् ? | News Dabali
आज मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, को को मन्त्री बन्दैछन् ?
January 19, 2017 | 8:06 am
संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले साना दलका तर्फबाट केहीलाई समेटेर बिहीबार (आज) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै छन् । संविधान संशोधनको अंकगणितको खेल तीव्र भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले साना दलका सांसदलाई बिहीबार नै मन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गराउने भएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहलाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो । सरकार गठनको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको हो । ‘अरू दललाई पनि सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ, तर त्यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन,’ मन्त्री महराले भने ।
सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने पक्का भएको छ । सो मन्त्रालय हाल प्रधानमन्त्री आफैंसँग छ । यस्तै, खड्काले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेछन् । संसद्मा दर्ता भएर कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । विधेयक पारितका लागि ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ । तर, सरकारसँग हाल सोबराबरको सुविधाजनक मत नभएपछि साना दललाई सरकारमा ल्याएरै भए पनि विधेयक पारित गराउने सरकारको रणनीतिअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
आवश्यक थप मतका लागि सरकार निर्माणका बखत सरकारलाई समर्थन गरेका एकदुई सिट भएका दललाई पनि सरकारमा भिœयाउने गरी प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्न लागेको बताइएको छ । संसद्मा जम्मा कायम संसद् संख्या ५ सय ९५ छ । यसमध्ये संविधान संशोधनको विपक्षमा खुलेर लागेका नौ दलका गरी २ सय १ सांसद छन् । बाँकी ३ सय ९४ सांसद संविधान संशोधनको पक्षमा नै रहेको सरकारी बुझाइ छ । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका २ सय ७ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका ८१ सांसद छन् । यस्तै, राप्रपाका ३७ सांसद छन् ।